Polyester Sunscreen Fabric Manufacturers & suppliers - China polyester anwụ na-acha nchara nchara ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ
Australia polyester na Vinyl ịkwanyere polyester sunscreen Fabric maka ala Blind
Kedụ ihe kpuru ìsì nwere ike igbo mkpa ọtụtụ mmadụ?
Chịkwa ìhè bụ ihe arụ ọrụ kachasị maka ọtụtụ ndị ọrụ ịhọrọ ngwaahịa nchebe anyanwụ. Nzacha ma ọ bụ gbochie ìhè anyanwụ dị ka ihe oghere dị iche iche chọrọ.
Ngwaahịa ndò nke ọma nwere ike belata ike oriri n'ihi na ndị ọrụ anaghị adabere na ntụ oyi ma ọ bụ kpo oku iji chịkwaa okpomọkụ nke ụlọ ahụ. N'oge oyi, a ga-echekwa ego ikpo ọkụ site na 49%. N'oge ọkọchị, ihe ruru 60% nke ụgwọ friji nwere ike ịchekwa.
China Roller Shades Emechara Venetian Vision Combi Blinds Component Part Curtains
Ihe omuma agba maka Sunscreen Blind Shade Fabric
Maka ịchọ mma ezinụlọ, e nwere ụdị ihe ọmụma a na agba: ọ bụrụ na agba nke ime ụlọ mma ahụ ka ọkụ, ọ ga-enye aka iji melite nkwekọ nke mmetụta di na nwunye; ọ bụrụ na ejiri ihe na-acha anụnụ anụnụ chọọ ihe ọmụmụ ahụ mma, ọ ga-enyere ndị mmadụ aka itinye uche na mmụta na nyocha; n’ụlọ oriri na ọ restaurantụ theụ, tebụl iri nri na-acha uhie uhie na aja aja na-eme ka nri dịkwuo mma. Yabụ, ịha ncha dị ezigbo mkpa. Enwere ọtụtụ ajụjụ gbasara ụlọ akwụkwọ praịmarị na ya!
N'ime usoro mmepe nke ndụ mmadụ na ndụ ime mmụọ, agba agba maka ihe mkpuchi ala na-enwu mgbe niile na amara anwansi. Ọ bụghị naanị na ndị mmadụ na-achọpụta, na-ekiri, na-emepụta, ma na-enwe ekele maka ụwa nke agba agba, kamakwa na-eme ka nghọta na ojiji nke windo windo dị omimi site na mgbanwe nke oge ahụ.
Ala blind akwa akwa-eji nke ọma. Waterproof ala blinds nke siri ike na agba, hemp, grajentị, jacquard, na ọtụtụ ndị ọzọ na agba ọgaranya na China ndo akwa.
Window Blinds na-ekpuchi ihu igwe Anyanwụ Anyanwụ Anyanwụ maka ihe mkpuchi ihu
Shutter Window Blind
Nature kwesiri aha onye kere ya. Site na agba atọ dị mfe, o mepụtala ọtụtụ puku agba, dị ka odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mmiri, mara mma n'oge ọkọchị, acha uhie uhie maple n'oge mgbụsị akwụkwọ na ọlaọcha n'oge oyi. Agba ọ bụla nwere amara pụrụ iche. Mgbe ha jikọtara onwe ha, mmetụta a na-ahụ anya ga-abụ okpukpu abụọ na ọkara mgbalị. Ego ole ka ị mụtara iji nweta agba dị mma nke ụdị uwe dị iche iche dị nro? Taa, Groupeve ga-ekwu maka ya!
Kindsdị isi nke oge a
Curtainskwado ákwà mgbochi maka nchebe anyanwụ na mkpuchi ọkụ bụ usoro ọdịnala a na-ejikarị. E nwere ọtụtụ ụdị ákwà ngebichi, na nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya na ihe ngosi nke anwụ na mkpuchi ọkụ. Ọ kachasị mma ịhọrọ oke, ákwà ngebichi gbara ọchịchịrị na mkpuchi na ihe mkpuchi anyanwụ.
Rickwà mgbochi. Agba ahụ gbara ọchịchịrị ma na-agba ọchịchịrị, ka ọ na-adịkwu mma mkpuchi na mkpuchi mkpuchi, ebe akwa dị ọcha na ihe hemp na-eku ume. Nwere ike ịhọrọ ihe eji echebe UV. Ọ bụrụ na ịchọghị ịgbanwe ákwà mgbochi mbụ, ịnwere ike ịgbakwunye akwa nke mkpuchi shading n'etiti ákwà mgbochi akwa na ákwà mgbochi gauze.
1234 Osote> >> Peeji nke 1/4